Waxyaabaha Si Ogaada Marka Wadista In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waxyaabaha Si Ogaada Marka Wadista In Europe
Iyada oo boqolaal jiidashada taariikhi ah oo views weyn oo u dhaxayn qorraxda dhunkaday xeebaha si ay u buuraha cavernous, Europe si dhab ah u dhan leedahay. Waa iyadaa ugu fiican ee safarka wadada a, sida ay macquul tahay in aad jidka ka dhigi mid ka mid dalka si kale oo arrin saacadood. Sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha dunida ugu ammaanka badan in ay u safraan. Inkastoo news in Midowga Yurub ay dhawaan ku guuldareysatay inay u dhimaan heerka wadida khatarta ah, heerka dhimashada celcelis weli ugu hooseeya waxa ay weligoodba waa la (1 in 49 million).
Waxaa xusid mudan in ay jiraan siyaasado iyo cadaadiska qaar meel ku saabsan baabuurta la kiraysto iyo in dal kasta uu leeyahay xeer gooni ah sharciyada gaarka ah. Waa maxay dhammaataan la aqbali karo in mid ka mid ah dalka (wadidda aan xadka xawaaraha on Autobahn ee Germany ah, tusaale ahaan) Ma laga yaabaa in kale, sidaas darteed waxaa bixiya si ay u fahmaan shuruucda waddooyinka sida aad jidka ka dhigi marayo qaaradda.
Iyadoo tan maskaxda, aannu u diyaarinnay qaar ka mid ah talooyin anfacaya inuu kaa caawiyo inaad sii joogi ammaan ah oo ku xidha sharciga gudahood inta aad safarka yurub soo socda waddada:
1) Caymiyaan Your Vehicle
Waxaa lagama maarmaan ah in aad leedahay caymis iyo lacagta jabka halka baabuur-wadidda in Europe. Haddii aad qaadato gaari adiga kuu gaar ah, waxaad u baahan doontaa in aad la xiriirto shirkadda caymiska si ay u qaban qaabin. Caymiska waxaa badanaa lagu xidhay on in aad heshiis marka aad soo kiraystaan ​​baabuur, taas oo ka dhigaysa wax yar ka sahlan.
2) Soo qaado Muraayadaha tudhi Oo malahan
Ma ogtahay in haddii aad u baahan tahay in ay xirtaan lenses qoro halka baabuur kiro ah iyada oo loo marayo Spain, aad tahay loo baahan yahay si ay u fuliyaan labo ka mid labaad kula waqtiyada oo dhan? Dalalka kale ee ka yar adag oo ku saabsan this, laakiin waa dhaqanka wanaagsan in ay qaadaan labo ka mid labaad ee Duugga indhaha aad la mar walba, si loo hubiyo in aad ka warqabta khataraha oo dhan inta lagu jiro safarka waa in aad fasax Duugga isha hoose ama lumay.
3) Sida iska cad Iska ilaali cabbitaanka iyo baabuur wadidda
Iyada oo ay tani u ekaan karto sida qoraal cad, ma laga yaabaa in aad ogaataa in dalalka qaarkood waxay leeyihiin xadka dulqaadka wadayaasha cabniin ah. Taas macnaheedu waa in darawalada looma oggola in ay wax khamri ah in ay wax kasta oo dhiig. Guddiga Yurub wuxuu bixiyaa talo ku saabsan Heerka Xadka khamriga ee dhiigga waayo, dal kasta. In Cyprus, waana sharci darro in cabbaan cabitaan jilicsan halka baabuur-wadidda. Tani waxay u muuqan karaan kuwo adag, laakiin waxaa muhiim ah in ay ixtiraamaan shuruucda dalka waa idin soo booqan in ay ka fogaadaan wax kasta oo ganaax la filayn.
4) Eryi Si The midigta ama xagga bidixda
Marka laga reebo United Kingdom, Ireland, iyo Malta, dhammaan dalalka Yurub eryi dhinaca gacanta midigta ee wadada. Waayo, dadka degan UK, this ka dhigi kartaa farsamooyinkooda sida xaajood marto a jihada lid saacad wareeg ah arrin adag, sidaa darteed waxaa haboon waqti qaadato si ay ula qabsadaan. Drivers waa in had iyo jeer ku eekaan xaq iyo fogaado jooga haad xarunta of jidadka waaweyn kala kulmaan. Marka dhaafay, xasuuso mar walba si loo hubiyo muraayad view danbe ayaa sidoo kale.
5) Caday Up On Your Road Calaamadaha
Fahamka calaamadaha wadada European kaa caawin doona inaad gaarto meesha aad u socoto si nabad ah oo kaa caawin doona in ay ka fogaadaan jebinta sharciga. Inta badan meelaha Yurub isticmaalaan calaamado caadiga ah taas oo macquul ah waa is sharaxaadda, laakiin kala duwanaanshaha yar font ama midabka u muuqdaan in la isku qaldo. Inta aad guda galin Safar ah, laga yaabaa in aad rabto in aad barato la kala duwan khiyaano in calaamado wadada Europe oo dhan. Ugu yaraan, waxaa laga yaabaa in ku caawiyaan si looga hortago in jahwareer, iyo ugu badnaan, badbaadin kara naftaada.
6) Fahmaan Sidee Toll Qashin Work
dal oo kala duwan ay leeyihiin heerka toll kala duwan iyo qaababka ururinta toll. In France, tusaale ahaan, weli waa la aqbali karo in lagu bixiyo lacag caddaan ah irdaha toll ee. gobollada kale u baahan doonaa in uu soo bandhigo warqad on gaariga si loo muujiyo in aad bixisay si ay u isticmaalaan wadooyinka qaar. inaad barato sida kiro shaqeeyaan kasta oo dalal aad loogu talagalay kaa caawin doona inaad si looga fogaado wax kasta oo rigoorayaal.
7) Qaadataa in Tareenku The Halkii Of Driving
Waa hagaag, haddii aad dhab ahaan doonayaan inay ku raaxaystaan ​​safarkaaga, tago kaaftoomi ee driving, oo kaliya tareenka ee Europe, qof walba ee qaaradda this isticmaali tareenka, oo ka duwan meelaha kale ee caalamka, waa mid aad u fudud si ay u iibsadaan tikidhada tareenka online la goobaha sida Save A tareenka, iyo aad u hesho in ay u safraan oo arag nooca aan aad u badan walwal.
Ready in ay ku raaxeystaan ​​Europe? cimiladu aad dooratid baabuur wadista ama tareenka, noo xusuusataan at Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Waxayaabaha ah inaad ogaato marka wadista ee Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#driving rail tareenada tareen safarka